I-33Ngaphesheya: Ukwenza imali kwezithameli ngaphakathi kokubuka ngesihlungi sangaphambi kwebhidi | Martech Zone
Ngaphesheya: Ukwenza imali kwezithameli ngaphakathi kokubuka ngesihlungi sangaphambi kokubhida
NgoLwesibili, Novemba 15, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Sibone abashicileli abaku-inthanethi bedonsa kanzima kulo nyaka. Iningi lokukhuphula okuqukethwe kwabo, likhulise ukufakwa kwesihloko sabo, bathenge ababukeli ukukhulisa izibalo zabo zokubuka, futhi bavula amasayithi abo kunoma yikuphi noma kubo bonke ukukhangisa. Ngokwami, ngikholwa ukuthi iphutha lelo. Sigweme ukuthenga ababukeli, sagcina izihloko zethu ziqinile, futhi senqabe ukukhangisa kaninginingi ekukhangiseni okungekho esihlokweni.
Ngokujabulisayo, amanethiwekhi wokukhangisa ayaphendula. Kusetshenziswa imali elinganiselwa ku- $ 160 billion ezosetshenziswa emhlabeni jikelele ekukhangiseni kwedijithali kulo nyaka, ngokusho kuka Ucwaningo lweJuniper. Amapulatifomu afana 33Konke banethemba lokuqondanisa ukuthi abathengi basebenzisana kanjani nokukhangisa okuku-inthanethi ngokuzibandakanya okukhulu kunokugxila kumamethrikhi wokubuka. Abakhangisi nama-CMOs ngaso sonke isikhathi kudingeka bathethelele i-ROI ekusetshenzisweni kwabo kwezikhangiso online. Izinga lezimboni njengeMedia Ratings Council (MRC), libeke umugqa ophansi kakhulu uma kukhulunywa ngokunquma ukuthi isikhangiso sithathwa njengeso kuyabukeka.
Ukubukwa kwesikhangiso seselula nedeskithophu kudinga okungenani ama-pixels angama-50% ukubukwa okungenani umzuzwana owodwa wezikhangiso zokubonisa, imizuzwana emibili yezikhangiso zevidiyo. MRC
Ngakolunye uhlangothi, abashicileli balwa nendlela yokwenza imali ngamasayithi abo. Abathengi bayadikibala, bahlaselwa yimilayezo engabalulekile noma ukuphazamiseka lapho bedla okuqukethwe. Yilezi zinkinga nokuhlaziywa okujulile kokuzibandakanya kwabathengi nezikhangiso eziku-inthanethi ezibumbe ukwakheka nokwakhiwa kwemikhiqizo emibili emisha evela 33Konke.
Amayunithi Wezikhangiso Ezintsha Namavidiyo Okusha Anikeza Ukubukwa Okuphakeme Kakhulu Kwemboni
33Konke yandise ipulatifomu yayo yohlelo ngokwethulwa kwe- Ideskithophu Yokuphakelayo Ividiyo futhi Umthelela Wokuphakelayo Kwideskithophu. Idizayinelwe ukusiza abashicileli ukuthi basebenzise imali engenayo ekhulayo, le mikhiqizo emisha ayizithikamezi, iyunithi lezikhangiso ezinomthelela omkhulu ezivela kokuqukethwe yiwebhusayithi noma kokuphakelayo komkhiqizo. Amayunithi wesikhangiso aphendula ezenzweni zokupheqa zomsebenzisi futhi ahlala abonakala inqobo nje uma ubuciko bubuka okungenani amaphesenti angama-50.
Njengoba ividiyo iqhubeka ikhula ngokuthandwa, 33KonkeAmayunithi wesikhangiso sevidiyo yediski engaphakathi kokuphakelayo adlala ngokuzenzakalela izindawo ezingama-15- kanye nemizuzwana engama-30 ezihlelela ukubukwa kweselula nedeskithophu, zivela ekusakazweni kokuqukethwe lapho ubuciko bunamaphesenti okungenani angama-50. Uma sesiphumile ekubukeni komsebenzisi, ividiyo iyama bese iqala kabusha ukudlala uma isibonile. Imikhiqizo emisha yenzelwe okuhlangenwe nakho komsebenzisi okungabonakali, okunikeza abathengi ukulawula okuphelele kulwazi, benenketho yokuphatha ivolumu noma ukuvala isikhangiso.
Ukwenza imali ngokugcwele kusayithi lethu, sidinga ukuphendula kuzintshisekelo zabasebenzisi abadinga ulwazi olungenakuphazamisa kudeskithophu nakuselula kanye nezidingo zabathengi beselula kuqala, imikhiqizo yokudla okuletha ukubukwa okuphezulu. UPeter Cunha, Isiteshi Sokutshala Imali
Ukuhlaziywa Kwezikhangiso Eziku-inthanethi Kwembula Izikhathi Zokubandakanywa Komsebenzisi Okuphakeme
Imikhiqizo emisha ikhombisa 33KonkeUkuhlaziywa kwakamuva, kulinganiswa ukuthi ukubukeka kwezikhangiso eziku-inthanethi nobude besikhathi sesikhangiso kuhlose ukukala ukuthi lawo maqiniso amabili anokuthinta kanjani ukuzibandakanya komsebenzisi. Ngemuva kokuhlaziya izikhangiso eziku-inthanethi eziyizigidi ezingama-160 kumasayithi wabashicileli angama-738 isonto elilodwa, i-33Across ithole ukuthi ngokwesilinganiso, abathengi abaningi bacofa izikhangiso kumaki wesekhondi elingu-15 nokuzibandakanya kukhuphuke ngokuhamba kwesikhathi. Iphulwe yidivayisi:
U-50% wokuzibandakanya komsebenzisi kwenzeke kudeskithophu ngemuva kwemizuzwana engu-15
Kumakhalekhukhwini nakumathebulethi, u-50% wokuzibandakanya komsebenzisi uvele ngemuva kwemizuzwana eyisikhombisa
Ngomaki wamasekhondi angama-30, ama-68% wakho konke ukuzibandakanya kwenzeke kudeskithophu, ama-74% enzeka kuselula, kwathi ama-78% enzeka kuthebhulethi
Ukuhlaziywa kufakazela ukuthi ukuze ukukhangisa ku-inthanethi kusebenze, izikhangiso kudingeka ukuthi zibukeke kakhulu futhi zibukeke ngaphezu kwezimfuneko zamanje ezikhona.
Uma i-metric eyinhloko yomthengisi ukubukwa kususelwa kumhlahlandlela we-MRC futhi ukuhlaziywa kwethu kufakazela ukuthi amaphesenti angama-98 okuzibandakanya ayenzeka ngemuva komzuzwana owodwa. Kuyacaca ukuthi kunabasebenzisi bamathuba amancane abazobona leso sikhangiso, ingasaphathwa eyokuzibandakanya naso. Ukuze ama-CMO athole noma iyiphi imbuyiselo ebonakalayo kutshalo-mali lwawo, adinga ukukhuphula izinga ekubukekeni kwezikhangiso nesikhathi sokubukwa. U-Eric Wheeler, i-CEO, 33Ngaphesheya.
Izinga lemboni eceleni, abashicileli kanye nabakhangisi kufanele babheke isikhathi esimaphakathi sesikhangiso futhi banqume ukuthi ngabe amayunithi esikhangiso abukeke ngempela isikhathi eside ngokwanele ukuthola impendulo noma ukwenza umthelela onengqondo. Ukuqhubeka nokuqinisa utshalomali lwabo ekukhangiseni kwedijithali, ukukhulisa ukuzibandakanya, nokugwema izindawo ezingabonakali, kufanele futhi bangeze ngaphakathi kokuphakelayo amayunithi weselula futhi babonise kumxube wokumaketha.
Amapuzzli we-crossword anzima kakhulu angaxazululwa uma ufunda igama elikhulu eliqondile phakathi kwepuzzle. Kumaphazili amaningi alukhuni lokhu kuvame ukuzungeza ama-32 noma ama-33 ngaphesheya. 33Konke ivula iphazili lokukhangisa okuku-inthanethi kwekhwalithi.
Tags: 33 ngaphesheya33ukuwelaumbono wokukhangisaumkhandlu wokulinganisa abezindabaI-MRCUhlelo lokukhangisaukwenza imali komshicileliimihlahlandlela yokubukwa
Ubude bokuqukethwe: Ukunakwa kwe-Spans Ukuqhathanisa nokuzibandakanya